Ireo no vaovao rehetra nambaran'ny Microsoft omaly, anisan'izany ny Surface Book i7 na ny Windows Holographic VR | Vaovao momba ny gadget
Ireo no vaovao rehetra nambaran'ny Microsoft omaly, anisan'izany ny Surface Book i7 na ny Windows Holographic VR
Omaly i Microsoft dia nanao hetsika tany New York City izay efa niandrasantsika hatry ny ela, satria ny tsaho rehetra dia nilaza fa afaka mihaona fitaovana vaovao avy amin'ny orinasa Redmond izahay izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha. Azo antoka fa efa namaky fampahalalana marobe momba ilay hetsika ianao, fa raha sendra tsy tratranao izany na te-hanao famerenana, anio amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika izao ireo vaovao rehetra natolotry ny orinasa tamin'ny fomba ofisialy, miaraka amin'ny fitomboana fahombiazana Satya Nadella.
Ny Surface Studio, ny fanavaozana ny Surface Book natao batemy ho Boky ambonin'ny i7 na ny Windows Holographic VR Ireto ny sasany amin'ireo zava-baovao natolotra omaly ary hasehonay anao amin'ny antsipiriany eto ambany.
Mazava ho azy, alohan'ny hanombohantsika dia tsy maintsy miresaka momba ireo olona tsy tonga be loatra izay tsy isalasalana fa ny Surface Pro 5 izay be dia be ny tsaho tato ho ato, ary tamin'ny farany toa toa nanapa-kevitra ny hamonjy azy amin'ny fotoana tsara kokoa i Microsoft. Ho fanampin'izany dia malahelo ny Surface Phone, ilay fitaovana finday vaovao nandrasana hatry ny ela miaraka amin'ny Windows 10 Mobile izay antenain'ny ekipa Redmond hamerina ny fisian'izy ireo amin'ny tsenan'ny finday.
1 Microsoft Surface Studio, birao misy ny birao
2 Microsoft Holographic VR, zava-misy virtoaly vaovao an'ny Microsoft
3 Microsoft Surface Book i7
4 Windows 10: Fanavaozana ny mpamorona
5 Hevitra malalaka; Mikendry mpihaino sangany ny Microsoft
Microsoft Surface Studio, birao misy ny birao
Efa ela ny tsaho fa hanangana fitaovana birao iray i Microsoft, aingam-panahy avy amin'ny Surface malaza, ary omaly dia nanjary zava-misy io. Surface Studio.
Amin'ity fitaovana vaovao ity dia miavaka izy io ankoatry ny endriny, izay hitanao amin'ny horonantsary izay ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity, izay hahafahantsika miasa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny efijery na hampiasana azy amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny kitendry. ary ny totozy.ny heriny lehibe ary mazava ho azy ny fisian'ny Windows 10, ny kinova farany an'ny rafitra fiasa Redmond.
Mikasika ny fiasa sy tsipiriany, avy eo averintsika jerena izany;
LCD touch panel, miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass 1.3 milimetatra fotsiny ary misy vahaolana 3840 × 2160 (2K)
Intel processeur i7
Nvidia GTX980M GPUs
Fahatsiarovana RAM 32 GB
Fitehirizana anatiny 2 TB
Mpamaky karatra SD, MiniDisplayPort, Ethernet ary seranan-tsambo USB 3.0 efatra, ary eny, manana Jack 3,5mm ihany koa io.
Fitaovana ofisialy amin'ny karazany rehetra ary izany dia hamidy tsy ho ela amin'ny alàlan'ny Microsoft Store
Mazava ho azy fa misy lafiny ratsy io fitaovana io, izay araka ny noeritreretinao azy ny vidiny izay hanomboka amin'ny 3.000 Euros satria hisy ny kinova maromaro arakaraka ny fitehirizana anatiny sy ny lafiny hafa, izay indrisy fa tsy ho azon'ny mpampiasa. Ny fahazoana dia manomboka amin'ny volana desambra raha nohamafisin'ny Microsoft tamin'ny fomba ofisialy omaly fotoana fohy taorian'ny hetsika, na dia mety misy aza ny fahatarana amin'ny fanaterana ilay fitaovana raha toa ka mihoatra ny kajikajiana voalohany nataon'ny orinasa monina ao Redmond ny fangatahana.
Microsoft Holographic VR, zava-misy virtoaly vaovao an'ny Microsoft
La zava-misy virtoaly Nanjary iray amin'ireo kianja ady lehibe eo amin'ny tontolon'ny teknolojia izy io ary efa vitsy ny orinasa tsy nanapa-kevitra ny handefa ny fitaovany manokana eny an-tsena. Microsoft dia efa nanana ny tetikasany teny an-tsena, ny Hololens, fa ny hetsika omaly dia nanambara ihany koa fa nanao sonia fifanarahana maromaro miaraka amina andian-orinasa hamokatra ny solomaso virtual reality, amin'ny vidiny mora azo ary afaka miditra ao amin'ny Windows 10 izao rehetra izao.
Ny sasany amin'ireo orinasa ireo dia Dell, Lenovo, HP ary HACER izay handefa solomaso virtoaly virtoaly mandritra ny taona 2017, vita batemy ho Microsoft Holographic VR, miaraka amin'ny vidiny ambanin'ny 300 euro, zavatra izay tsy isalasalana fa hankasitrahanay be dia be ireo mpampiasa rehetra izay itadiavan'ny zava-misy virtoaly antsika bebe kokoa isan'andro. Mazava ho azy, mandritra ny fotoana fohy dia tsy maintsy miandry isika hahalala daty ofisialy amin'ny fandefasana ireo fitaovana ireo, ary hahafahana manamafy ny vidiny mihena miaraka amin'izy ireo.
Ny fianakavian'ny Surface dia tsy vitan'ny hoe nanitatra ny Surface Studio fotsiny, fa nanolotra fanavaozana ny Surface Book koa i Microsoft, izay nanapa-kevitra ny hanao batemy amin'ilay anarana kely miverimberina hoe Boky ambonin'ny i7.
Ny anarana dia efa manome antsika famantarana maro momba izay ho hitantsika ary izany dia Na dia ivelany aza dia tsy niova firy raha oharina amin'ilay kinova voalohany tonga volana vitsivitsy lasa izay teny an-tsena, ao anaty no ahitantsika hery sy fahaleovan-tena bebe kokoa.
Ny orinasa izay mitantana an'i Satya Nadella dia tsy te hanome tahirin-kevitra momba ny fahefana sy ny marika be loatra, nisy fiantraikany hatramin'ny 16 ora ny fizakantenam-panjakana ary tafiditra ao koa ny GPU, izay manana fahefana avo roa heny amin'ny an'ny voalohany. ny Surface Book dia misy telo koa an'ny MacBook Pro 13-inch an'ny Apple.
Ho fanampin'izany, ao anatiny dia ahitantsika koa RAM 8GB sy fitehirizana anatiny 256GB. Ary koa, raha tsy ampy ho anao io dia hisy ihany koa ny kinova faharoa miaraka amin'ny tahiry anatiny 512GB. Izao indray no tokana fa azo apetraka amin'ity Surface Book i7 vaovao ity ny vidiny ary izay ny kinova maotina indrindra dia hiakatra hatramin'ny 2.400 euro ho an'ny 2.800 euro izay ho be mpitahiry vola indrindra.
Etsy andaniny dia tianay ny hamela ny kinova farany farany sy mahery an'ny Surface Book vaovao izay hanana RAM 16GB sy fitehirizana anatiny 1TB SSD, izay mitentina hatramin'ny 3.300 euro ny vidiny, mazava ho azy fa vola be loatra saika ho an'ny paosy rehetra.
Windows 10: Fanavaozana ny mpamorona
Mazava ho azy fa tsy te-hanadino ny hetsika omaly i Microsoft ny vato fehizoron'ny tetikasany, izay mazava ho azy Windows 10 ary amin'ny ambaratonga ambany kokoa Windows 10 Mobile. Mba hanohizana ny fanatsarana azy sy hitondrany azy amin'ny ambaratonga mendrika azy mandritra ny volana vitsivitsy, dia hotohizina ny famoahana ireo vaovao ary koa amin'ny fiandohan'ny taona manaraka dia havoaka ny fanavaozana lehibe faharoa.
Hatramin'izao dia fantatra amin'ny anarana hoe Redstone 2, fa Hatramin'ny omaly dia efa manana anarana vaovao izy, "Fanavaozana ny Mpamorona", noho ny fifantohany amin'ny famoronana atiny, na dia hisy fanatsarana sy vaovao marobe amin'ny sehatra hafa raha ampitahaina amin'ny zavatra hitantsika tao amin'ny Windows 10 Annivers Update.
Anisan'ireo zava-baovao ilaina indrindra dia ho hitantsika ilay kinova vaovao an'ny Paint malaza, izay efa noresahintsika tamin'ny fotoana maromaro ary izay homena anarana hoe Paint 3D.
Araka ny efa nolazainay, ity fanavaozana ity dia manomboka haparitaka amin'ny mpampiasa rehetra manomboka amin'ny taona manaraka sy mandritra ny enim-bolana voalohany. Manantena aho fa amin'ity fanavaozana ity dia tsy misy ny lesoka ao anatin'ilay fanavaozana lehibe farany ary niteraka olana lehibe ho an'ny Microsoft sy ho an'ireo mpampiasa Windows 10 rehetra.
Hevitra malalaka; Mikendry mpihaino sangany ny Microsoft
Amim-pahatsorana ary raha tso-po ianao anio dia mieritreritra aho Manjary diso be loatra i Microsoft tato ho ato Ary raha mandinika ireo fitaovana natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly isika, dia mifantoka bebe kokoa amin'ny mpihaino elitista izy ireo, mihoatra ny an'i Apple aza. Azontsika atao ny mieritreritra fa te-hitarika ny fitaovany any amin'ny tontolon'ny asa izy ireo, saingy raha ny marina dia lafo be amiko ny asa ataon'ny orinasa iray handany vola mihoatra ny 3.000 euro amin'ny solosaina birao na ohatrinona na ohatrinona ny fampiasana azony.
Mpampiasa maro no nanonofy ny amin'ny mety hisian'ny solosaina birao, miaraka amin'ny tombo-kase Microsoft ary ny tombony azo avy amin'izany eo amin'ny lafiny rindrambaiko sy fitaovana. Na izany aza, tsy haiko hoe firy ireo mpampiasa no vonona handany vola be amin'ilay fitaovana mahafinaritra natolotr'i Redmond omaly. Farafaharatsiny omaly, raha vao fantatro ny vidiny, dia diso fanantenana ny fiheverako ny hanana birao Surface.
Mazava ho azy, na eo aza ireo fitarainana sy fitomaniana ireo dia nahazo fitaovana tsy manam-paharoa i Microsoft izay hikarakarana ny antsipiriany rehetra, afa-tsy ny vidiny. Ny mahamenatra lehibe dia ny omaly tsy nahitantsika tamin'ny fomba ofisialy ny sasany amin'ireo fitaovana tena tadiavin'ny rehetra toa ny Surface Pro 5 na ny Surface Phone andrasana, ilay fitaovana finday vaovao misy Windows 10 Mobile, izay mety hidika ny fitsanganan'i Nadella tamin'ny finday. tsenan'ny telefaona. Angamba amin'ny fiandohan'ny taona izay nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana ny Windows 10 dia afaka mahita ireo fitaovana ireo ho lasa zava-misy isika.
Ahoana ny hevitrao momba ny vaovao sy ny fitaovana vaovao natolotr'i Microsoft?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity fidirana ity na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay ary lazao anay ihany koa raha toa ka manantena fitaovana hafa ianao amin'ny hetsika omaly. Raha tianao koa dia azonao atao ny milaza aminay ny hevitrao momba ny vidin'ny fitaovana vaovao, indrisy fa tsy tratry ny paosin'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ireo no vaovao rehetra nambaran'ny Microsoft omaly, anisan'izany ny Surface Book i7 na ny Windows Holographic VR
Navoakan'i Microsoft ny fitaovan'ny Mianatra azy
Ity charger tsy misy tariby ity dia manome folo metatra isan-karazany